अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि…. - बिरगंज खबर बिरगंज खबर
अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि….
२४ वैशाख, काठमाडौं । कौशलटारस्थित भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालमा १४ जना कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत थिए । बिहीबार राति ९ बजेतिर चिकित्सकले बिरामीका आफन्तलाई बोलाए र आफ्ना बिरामीलाई जतिसक्दो छिटो अर्को अस्पतालमा लैजान आग्रह गरे ।
अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि…., स्रोत अनलाईन खबर
पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभरी ९१९६ जनामा कोरोना संक्रमण